Banyere Anyị - Shenzhen Joint Technology Co., Ltd
Mmadụ Bịa ka ụlọ ọrụ!
Honor iru eru
Mmanụ ụgbọala Ọkwa mmetụta
mmanụ ụgbọala Monitoring
Oyi Chain Monitoring
7 Days a izu si 9:00 am na 7:00 pm
Shenzhen Joint Technology Co., Ltd e guzobere 2006, ụghalaahịa edenyere n'akwụkwọ ikikere 'jointech', na formallylisted na atọ ọhụrụ iba ke February 2016, na ngwaahịa koodu: 835897.
The ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na-enye IZIRỊTA agba na mobile akpan owo monitoringand management ngwọta, na-agba mbọ na-na-ụlọ leadingmobile akpan owo management ngwọta na enye na rụọ. Mgbe afọ ofdevelopment na ìgwè, ụlọ ọrụ azụlitewo a zuru set ofintelligent ngwaike na mobile akpan owo management software ígwé ojii managementplatform, na-enye ndị ahịa na software na ngwaike na ngwaahịa na ọrụ, nke bụ elu, ihe bara uru, na regardenergy oriri na akpan owo nche management dị ka isi uru.
Thecompany isi azụmahịa na-ekpuchi atọ isi remote akpan owo management agba, gụnyere: 1. online ụgbọala na mmanụ ụgbọala oriri nlekota na management ọrụ, n'ihi na ụgbọala ọrụ ụlọ ọrụ ndị na-echegbu mmanụ ụgbọala oriri na vehicleposition; 2.the usoro nile nke akpa na ibu nlekota na management, maka ahịa ndị nwere nchegbu dị ukwuu na ibu nche na njem; 3.remotemonitoring na ime ihe nke ọrụ netwọk, n'ihi na ike na powerequipment n'ichepụta na ịnọgide na-enwe ụlọ ọrụ.
Eduga na site na ihe engineer na ihe karịrị afọ 30 na ahụmahụ na-na akpaaka akara ubi, anyị R & D otu na-ijeụkwụ na ihe ndị kasị elu nkà na ụzụ na ụwa, na mepụtara ọtụtụ ihe pụrụ iche ngwaahịa na software na nchọpụta Kemịkalụ. The R & D otu na-arụ ọrụ anya na mmekọ na ndị a na 55 mba na mpaghara, na-kwenyere na gụsịrị akwụkwọ institutes si Shenzhen University, etc.Our R & D otu mee nke karịa 30 injinia na Senior na Midlevel technical nzere, na-ekewa: Hardware Group, Software Group, Testing Group, Project Group, na ngo atụmatụ otu; JOINTECH na-etinye 8% ~ 15% nke ahịa olu n'ime R & D kwa afọ.
JOINTECH ka Mee elu-ezukọta akara withyearly ikike 100,000 mmanụ ụgbọala larịị sensọ, The mbụ akpaka testing igwe na China maka elu kpọmkwem mmanụ ụgbọala larịị mmetụta na ule ikike 500pcs kwa ụbọchị.
Get ọhụrụ ozi ọma nye kwa ụbọchị!